Abantu abazalwa ngonyaka we-Dragon - yimiphi iminyaka eyisibonakaliso salesi sibonakaliso? Lezi zingu-1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Zishiya ukuphila okucebile nokude kubuntu abazalwa ngaphansi kwalesi simangaliso esingavamile.
Isibonakaliso salesi silwane sinomthelela ongavamile wezinkanyezi ekupheleni kommeleli wonyaka. Nokho, umuntu akufanele acabange ukuthi umuntu ozelwe ngonyaka we-Dragon akakwazi ukwenza imizamo ekhethekile yokufeza impumelelo empilweni. Abamele abaningi balesi sibonakaliso banikezwa ukuhlakanipha okukhulu kusukela ekuzalweni. Into ebaluleke kakhulu akufanele ibe nesivila futhi ukwazi ukuyisebenzisa ngesikhathi futhi ukuyisebenzisa.
Izici ezihle futhi ezimbi
Umuntu ozelwe ngonyaka we-Dragon, kunoma yimuphi inkampani, angaziboneli ngokungazi lutho. Uqobo kakhulu esahlulelweni sakhe, ngakho-ke uzizwa yena isithakazelo esiqotho kwabanye. Abamele lesi sibonakaliso bahlukaniswa ngokuphakade okunamandla nokuqina okukhulu. Abantu abazalwa ngonyaka we-Dragon, ngezinye izikhathi bakwazi ukwenza ukuqhuma okuphazamisayo. Kodwa lokhu kuyinto ehlukile kunejwayelekile.
Abamele lesi sibonakaliso banezinto eziningi zokuzilibazisa. Okukhethwa okukhethekile kunikelwa ezenzweni zokuzilibazisa ezemidlalo. I-Dragons eyaziwa ngokuthi abahambi abathanda futhi abathandi beveli. Esikhathini sendawo yokukhiqiza, bayakwazi ukuphumelela ezinkambeni eziningi: kwezokwelapha, ezenzeni, ezindabeni zezempi nasekufundiseni. Lokhu akulona uhlu lonke lobuchwepheshe olutholakala kummeleli ohlakaniphile walesi sibonakaliso.
Umuntu, owazalwa ngonyaka we- Dragon, i- horoscope yaseShayina ayinikezi nje izimfanelo ezinhle zomlingiswa. Abanye abantu balesi sibonakaliso banobuncwane obukhulu kakhulu futhi abanesineke ebuhlotsheni babo nabanye. Imvelo yabo ivame ukubonisa ukuthula, ukuhlukumezeka nokubekezela. Ababhula ngezinkanyezi bacela amaDragons ukuthi banqande ubuntu obumnyama wobuntu babo ukuze baphile ngokuvumelana nabo kanye nezwe elibazungezile.
Iyini i-Dragon enothando?
Abamele lesi sibonakaliso ngokuyisisekelo bavumela abanye ukuba bathande ngokwabo. Ngokuvamile bahluleka ukuzwa umuzwa weqiniso wothando. Ngokuvamile ikhwalithi enjalo yomlingisi ishiya emva kobudlelwane ne-Dragon trail yabalingani abakhubazekile ngezinhliziyo eziphukile. Abesifazane balomnyaka baveza umbono oqinile kobulili obuhlukile. Ikakhulu kulabo abamele uphawu lukaDrako bangamadoda ahloniphekile. Ziyiloqobo kusukela ngomzuzu wokuqala okuthakazeliswa intombazane enqume futhi enenjongo-idrako. Kuyoba owesifazane owenza ibhizinisi elimangalisayo, ngoba isici esiyinhloko salesi wesifazane yibhizinisi, ukugcina isikhathi nokusebenza. Akayithandi imizwa yakhe yokubusa phezu kwakhe. Ngakho-ke, ukukhetha umlingani, uyasondela ngokucophelela, futhi ngezinye izikhathi ngokuhlakanipha. Njengomthetho, nxazonke obamele lesi sibonakaliso kukhona amadoda amaningi. Ngezinye izikhathi, ngenxa yalokhu, kunzima ukuthi intombazane yezinyoka ikhethe. Ekuphileni komndeni, uvame ukuthatha isikhundla somholi futhi akhokhele kakhulu imisebenzi yakhe yokukhiqiza. Naphezu kwalokhu, endlini yakhe njalo kuyoba khona njalo ukuhleleka nokuvumelana kuzo zonke izinto.
Ama-Dragons abesilisa azinzibophezele kakhulu futhi azibandakanya. Abavamile ukuhlala behlala bodwa. Abesifazane bayabakhathalela, bakhathazwa yi-magnetism yabo yemvelo. Futhi, uma i-Dragon izoba nesithakazelo esiqotho kumlingani wayo, iyogeza ekunethezeni kokuncoma kwayo nezipho ezihlukahlukene. Ngeshwa, i-Dragon ingashisa masinyane imizwelo yayo, iphoqe umlingani ukuba ahlupheke ngenxa yokuntuleka kwakhe.
La madoda, azalwa ngonyaka we-Dragon, yini? Iminyaka yenza ukuba baphathe ukukhetha owesifazane ngobuhlobo obuseduze ngokucophelela. Abamele abanesidingo socansi abanamandla ukuzizwa benethemba lentombazane futhi babe nekhaya elithembekile ngemuva. AmaDragons abesilisa abhekwa njengabasebenzi, ngakho-ke abesifazane babo bavame ukuchitha ubusuku obude bodwa. Kodwa ummeli walesi sibonakaliso ngokuqinisekile uzokhetha isikhathi sakhe wesifazane futhi abe neholide elihle naye eHiwaiian Islands!
Unyaka we-Dragon - yimiphi iminyaka efanelekile ebuhlotsheni bothando?
Kubantu abazalwa ngonyaka we-Dragon, i-horoscope yamaShayina icebisa ukunakekelwa kubalingani abazalwa ngaphansi kwezibonakaliso ze-Rooster, i-Monkey no-Rat. Abamele balezi zibonakaliso ngendlela ngayinye bazokugcwalisa ngokuphelele i-Dragon. Ngeke kube nzima ukuthi i-Rooster ihlale emthunzini udumo lomlingani. Uma kunesidingo, uzokwazi ukusinda kalula esikhathini sokuntuleka kwemali, kunokuba uthanda i-dragon eyisebenzayo. I-monkey enezimo eziguquguqukayo ezizokwazi ukuzivumelanisa kalula nomlingisi ongeke uzwe we-Dragon wesilisa. Isilinganiso sizokunqoba umlingani ngokuzinikela kwakhe kanye nokukwazi ukuphatha isabelomali somndeni. Abalingani abangafuneki ebuhlotsheni bomndeni ne-Dragon yi-Tiger nenja. Abantu-AmaTigers basuke benesihe futhi bazimisele ukuletha ukuphila okungalingani kwe-Dragon. Ubuhlobo obunjalo buyofana neqembu lokulwa, kunokuba kube nobuhlobo obuvumelanisiwe bombhangqwana onothando. Inja ye-Dragon ayifuni ngokungadingekile, uqaphele futhi ayikho ithemba. Lezi zimfanelo zingamcasula u-Dragon othembekile, futhi ngokushesha wakhathazeka ukuze alondoloze umoya womlingani wakhe odidekile.
Unyaka we-Dragon: i-horoscope yodiacac
I-Dragon-Aries ibhekene nokuqina okukhulu nokubekezela. Ngokwengxenye izosisiza ukuba afeze umgomo wakhe. Kodwa uma ebhekene nezimo eziguquguqukayo, wayezobe ephethe amaconsi ambalwa endleleni eya empumelelweni. Umuntu onjalo kubaluleke kakhulu ukuba nomngane onokwethenjelwa ongamsiza ngeseluleko ngesikhathi esifanele. I-Dragon-Aries ingcweti yemvelo emkhakheni wezohwebo, ukwakhiwa kanye nezinsizakalo zomphakathi. I-Dragon-Taurus ihlukaniswa ukunambitheka okucashile nothando kukho konke okuhle kakhulu. Kufana nesibongo nesithandani eshaweni. Angakwazi ukuzibonela ngokugcwele embukisweni njengomdwebi, umklami wefashini, umculi. Lezi Dragons zingabantu abakhulu bomndeni.
Amawele we-Dragon ayinhlobo eliphikisanayo. Isimo sakhe sengqondo singashintsha ngokuphawulekayo kusukela esimweni esihle kunazo zonke kuya entukuthelo evuthayo. Laba bantu badinga ukuthola igolide elishoyo, ukuze indlela yabo yokuphila ikwazi ukulinganisela. I-constellation yeCancer inikeza i-Dragon iphupho. Ngokuvamile amapulani omuntu onjalo awakude nezeqiniso. Bakhuthazwa ukuba bakhe indawo eqinile ngaphansi kwezinyawo zabo. I-Dragon-lion, njengoba yaziwa, ithanda ukukhanya. Uyozizwa ephilayo uma ekhona. I-Constellation ye-Virgin inikeza umnikazi wayo ngendlela ehle futhi ehlelekile. Udrako onjalo unesipho sokukholisa futhi angathwala ngokuphepha imibono yokuqala kunazo zonke kubantu.
I-Dragon-Libra ayithandi isimiso. Angasho ukuthi ukhathele yizinto zonke: ukudla akunambitheki, ubulili obuhlukile abuyithandi. Kuyinto efiselekayo ukushintsha isimo ngokuphindaphindiwe futhi kusetshenziswe ngemibono emisha. I-Scorpio, ezalwa ngonyaka we-Dragon, igxile ezindabeni zomhlaba jikelele. Lo muntu ungumuntu ophelele. Noma konke noma akukho! Akesabi futhi uvame ukuthanda ukuhileleka ezintweni eziyingozi. I-Dragon-Sagittarius yiyona ehlakaniphile kakhulu futhi ehlala phakathi kwamakhelwane. Akafaki udumo emhlabeni jikelele, kodwa unayo yonke imidwebo ye "umkhadikhazi obomvu". Ungumlingani osebenzayo futhi umngane onokwethenjelwa onesimo esihle.
Izimfanelo zomuntu we-Dragon Capricorn zisekelwe ekuzinzeni. Kodwa-ke, ummeli walesi sibonakaliso akaveli ngaphandle. Uma ekhetha umsebenzi wezamabhizinisi, ngeke kudayiswe izimbali, kodwa ukudayiswa kwezilwane ezingaphandle. I-Dragon-Aquarius inomlingiswa obalulekile ngokuphathelene naye kanye nabanye abazungezile. Ubhekene nezinkinga ezinkulu futhi awela kalula ekucindezelekeni. Lesi simo sengqondo sithinta kakhulu imisebenzi ayisebenzisayo. I-Dragon-Fish ibucayi kakhulu. Ungumbonisi wobuhle bonke. Ngeshwa, abameleli abaningi balesi sibonakaliso banokuzethemba okuphansi. Ababhula ngezinkanyezi banxusa abaDragons abanjalo ukuba bachithe iningi lezindinganiso zabo kanye neminye imikhuba.
I-Metal Dragon ( 1940, 2000)
Abamele i-Metal Dragon bahlukaniswa ngokuziphendulela kwabo, imicabango emihle kanye namandla okungaxhunyiwe. Abantu abanjalo bangabizwa ngokuthi abavukeli. Abesabi isizungu futhi bayabizwa ukuhumusha imibono eqinile ibe yiqiniso. Kubantu besibonakaliso i-dragon, abaneminyaka yabo yokuzalwa ewa phezu kwalokhu ngenhla, kubalulekile ukuqinisa ukufutheka kwakho ngokweqile.
I-Dragon Dragon (1952, 2012)
Udrako onjalo lucky kakhulu. Unamandla futhi unobungane. Into ewukuphela kwayo, angabhekana nokuntuleka kokuzijabulisa. Kodwa ikhono lakhe lokuzwelana nabantu futhi ubaxolele ngenxa yobuthakathaka babo buqeda lesi sici.
I-Wooden Dragon (1904, 1964)
Abamele kulo nyaka babhekene nezenzakalo ezijulile nokusebenza. Ngokuvamile baba ama-generator wemibono ehlukahlukene ethakazelisayo futhi bazama njalo ukuwahumushela ekuphileni kwangempela. Lezi Dragons zihlukaniswa ngokuphana okukhethekile, amahlaya nokuphana kwezenzo.
The Dragon Fiery (1916, 1976)
Abantu abazalwa kulo nyaka we-Dragon, benzani? Iminyaka yensimbi yanikezela ngenhliziyo engaphakathi ezinzile. Abamele lesi sibonakaliso bangcweti abazimisele kakhulu futhi abanomthwalo kunoma iyiphi insimu. Naphezu kokusondelana ngokomzwelo, izidlamlilo zomlilo zijabulela ukuzwelana ngenxa yamakhono abo obuholi.
I-Earth Dragon (1928, 1988)
Leli Dragon elilinganisiwe kakhulu labo bonke abantu. Unengqondo ephilayo futhi engqondweni. Lo muntu uyazi ukuthi yini ayifunayo futhi uyaqhubeka efeza umgomo wakhe ngokuqhubekayo. I-Earth Dragon inezo zonke izinto ezidingekayo ukuze ube usomabhizinisi ophumelelayo noma owezimali. Abantu abazalwa ngonyaka kaDrako dragon yiziphakamiso ezinhle kakhulu futhi zithandwa kakhulu kunoma yimiphi imibuthano.
Ukuhambisana kweHoscope: I-Cancer neLibra
Usonkontileka Ngenxa Kanembeza - kuyisihluthulelo ukwakhiwa ngempumelelo
Eilat, Israyeli. obomvu kolwandle